दशैंमा खानेकुरा कसरी खाने ? मासुमात्रै खाने कि अरू पनि खाने ? – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७७, ९ कार्तिक आईतवार २०:३२
दशैंमा हामी कस्तो जीवनशैली अपनाइरहेका छौं त ?
दशैंमा के खाने ? “दशैंमा मासु खाने” मासु बिना दशैं अधुरो मानिन्छ । दशैं यस्तो चाड हो जसमा अरुबेला भन्दा मासुको प्रयोग अत्याधिक हुन्छ । मासु आफैंमा बोसो अत्यधिक हुने चिप्लो खानेकुरा त हुँदै हो, त्यसमाथि थप यस बेला तेलमा लपक्क पारेर अथवा अत्यधिक मात्रामा तेलको प्रयोग गरी खानेकुराहरु पकाइन्छ । साथसाथै रमाइलोको लागि जाँडरक्सीको सेवन गरिन्छ । जिब्रोका लागि स्वादिलो र मिठो तर अस्वस्थकर खानाको प्रयोग बढी गरिन्छ । यस्तो खानपान शैलीले स्वस्थमा नराम्रो असर पुर्‍याउँदछ ।
चाडपर्वमा शरीरको लागि आवश्यकभन्दा अत्यधिक बढी मात्रामा खानेकुराहरु खाइन्छ । सामान्यतः यो बेला हुने जमघटले गर्दा खानेकुराको दिनचर्यामा भारी फेरबदल आउँछ र जतिखेर पायो, त्यतिखेर खाने प्रचलन बढ्छ । यसरी एउटा नियमित दिनचर्याभन्दा फरक ढंगले जथाभावी खाने गर्दा पाचनप्रणाली सम्बन्धी समस्या, अपच, पखालाको जोखिम बढदछ । बढी मात्रामा नून, तेल र चिसो पेयको अत्यधिक सेवनसँगै चिनीको पनि प्रयोग हुन्छ जसले गर्दा रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोगका बिरामीहरुमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँदछ । सिसिको अचारको अत्याधिक प्रयोग, कार्बोनेटेड् पेय पदार्थको प्रयोगले रक्तचाप, मधुमेह, ग्यासट्राइटिसको जटिलता बढाँउदछ । माछा/मासुको अत्याधिक प्रयोगले शरिरमा अम्लीयपना बढाउँदछ । माछा मासु भनेको रेसा नभएको खानेकुरा हो । दशैंमा बढी मात्रामा मासु खाइने हुनाले कब्जीयतले पनि सताउन सक्छ ।
दशैं वा चाडपर्वको नाममा यो बेलामा साविकभन्दा बढी, दैनिक मासु खाइने हुनाले “हामीले खाने मात्रा” मा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु चाहिँ जरुरी छ । दशैंको बेला सामान्यतः मासु छदैं छ तरकारी किन पकाउन पर्‍यो अथवा दाल किन खानु पर्‍यो भन्ने भनाइहरु धेरै सुनिन्छ । तर हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने मासुले मात्रै हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक दैनिक भोजनको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले मासु भएपछि अरु खानेकुराहरु खाइबस्नु जरुरी हुँदैन भनने मानसिकता हटाउनु पर्दछ ।
मासु खाँदा राम्रो सित पकाएर खानुपर्दछ । छाला निकालिएको मासुको प्रयोग सबैभन्दा उचित हो । रोग निम्त्याउने किटाणु जनावरको छालामा पनि बढी हुने हुनाले छाला निकालिएको मासुको प्रयोग गरे फित्तेजुका को संक्रमण हुन सक्ने जोखिम कम हुन्छ । त्यसबाहेक, छाला निकालिएको मासुमा बोसोको मात्रा पनि कम हुन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने अत्यधिक बोसोको सेवनबाट हामी बच्छौं । यसले गर्दा बोसोको अत्यधिक सेवनले स्वास्थमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम स्वतः कम हुन्छ ।
पोषणको दृष्टिले मासु उच्चकोटीको भए तापनि मासुमा पाइने चिल्लो पदार्थ त्यसको स्रोतअनुसार फरकफरक हुन्छ । सेतो मासु जस्तै (माछा, कुखुरा) भन्दा रातो मासु जस्तो (राँगा, खसी, बोका) मा सेचुरेटेड बोसो बढी हुन्छ, जसले मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउँदछ । रातो मासुको पनि अत्याधिक प्रयोगले उच्च रक्तचाप र यूरिक एसिड, बाथ भएका व्यक्तिहरुमा जटिलता बढाउन सक्छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने थाल अथवा प्लेटको आकार १२ इन्चको छ भने सो प्लेटलाई बराबर चार भाग लगाउनु पर्दछ । सो प्लेटको १/४ भाग चाहिँ अन्न समूहको खाद्यन्नबाट भर्नुपर्दछ, अर्को १/४ भाग माछा/मासु, दाल र दुध तथा दुधजन्य समूहको खाद्यन्नबाट भर्नुपर्दछ र सो प्लेटको बाँकी भाग यानि १÷२ भाग सागसब्जी र फलफुलले समावेश गर्नुपर्छ । यसो गरी सन्तुलित भोजन गर्न सके स्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक असर कम गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, स्वस्थ जीवनका लागि दैनिक कम्तिमा आठ ग्लास पानी पिउनुपर्ने कुरा छ छँदैछ ।